Ana Epɛ dɛ Ihu Nokwar No?
KENKAN WƆ Abbey Abua Acholi Afrikaans Ahanta Albania Mmum Kasa Albanian Altai America Mmum Kasa Amharic Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Attié Australia Mmum Kasa Austria Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivia Mmum Kasa Boulou Britain Mmum Kasa Bulgaria Mmum Kasa Bulgarian Bété Cambodian Carib Catalan Cebuano Central Alaskan Yupik Chavacano Chichewa Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Costa Rica Mmum Kasa Croatia Mmum Kasa Croatian Cuba Mmum Kasa Czech Czech Mmum Kasa Damara Dangme Danish Denmark Mmum Kasa Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik Emberá (Catío) English (Borɔfo) Estonia Mmum Kasa Estonian Ewe (Awona) Faroese Fataluku Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon Frafra French French Mmum Kasa Fulfulde (Cameroon) Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Ghana Mmum Kasa Gitonga Gokana Greek Greek Mmum Kasa Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemala Mmum Kasa Guianese Creole Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Hopi Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungary Mmum Kasa Hunsrik Ibinda Icelandic Igbo Iloko Inakeanon India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Isoko Italian Italy Mmum Kasa Itsekiri Iu Mien Ivatan Japan Mmum Kasa Japanese Jiwaka Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kadazan Kalanga (Botswana) Kalenjin Kamayo Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinaray-a Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korea Mmum Kasa Korean Kosraean Kpelle Krio Kryashen Kuhane (Subiya) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kurdish Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lakota Lamba Laotian Latvia Mmum Kasa Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuania Mmum Kasa Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Madagascar Mmum Kasa Madi Makasae Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Manipuri Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mayangna Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Melpa Mentawai Mexico Mmum Kasa Mfantse Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Netherlands Mmum kasa New Zealand Mmum Kasa Ngabere Ngangela Nias Nicaragua Mmum Kasa Nicobarese Niuean Norway Mmum Kasa Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Pashto Pemon Pennsylvania German Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Piaroa Pidgin (West Africa) Pilagá Poland Mmum Kasa Polish Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese Mmum Kasa Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chibuleo) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Macedonia) Romany (Northern Greece) Romany (Romania) Romany (Southern Greece) Rungus Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Scottish Gaelic Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Sweden Mmum Kasa Swedish Swiss German Mmum Kasa Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Ticuna Tigrinya Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Voru Wallisian Warao Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Yacouba Yakutsk Yapese Yoruba (Alata) Yukpa Zambia Mmum Kasa Zande Zapotec (Guevea) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Mmum Kasa Zulu
NOKWAR a ɔfa ebɛnadze ho? Nokwar a ɔfa nsɛmbisa a no ho hia nyimpa pii. Aso ebisa woho nsɛmbisa ahorow yi bi pɛn?
Aso ɔyɛ ampa dɛ Nyankopɔn dwen hɛn ho?
Amandzehu nye akodzi botwa mu da bi?
Sɛ nyimpa wu a, hemfa na ɔkɔ?
Ana ewufo bɛsan atsena ase bio?
Mebɛyɛ dɛn abɔ mpaa ma Nyankopɔn etsie?
Mebɛyɛ dɛn enya asetsena mu enyigye?
Hemfa na ibenya nsɛmbisa ahorow yi ho mbuae? Sɛ ekɔ nwomakorabew ahorow nye mbea a wɔtɔn nwoma a, ibenya nwoma ahorow a n’akyerɛwfo no susu dɛ wɔwɔ nsɛmbisa yi ho mbuae. Naaso, mpɛn pii no nwoma akyerɛwfo no nye hɔn ho nnyɛ adwen. Ɔtse dɛ mbrɛ mbuae a nwoma ahorow bi dze ma no tɔ aso mu dze, naaso ɔnnkyɛr na hɔn mber etwa mu.
Naaso, nwoma kor bi wɔ hɔ a ɔdze mbuae a ɔtɔ aso mu ma. Ɔyɛ nwoma a ɔkã nokwar turododo. Jesus Christ bɔɔ n’egya mpaa dɛ: “W’asɛm yɛ nokwar.” (John 17:17) Nyimpa pii gye to mu dɛ Asɛm no nye Nwoma Krɔnkrɔn, Bible no. Wɔ nsɛm a odzidzi do yi mu no, ibenya mbuae a ɔtɔ aso mu a Bible no dze ma no bi.
SIANTSIR A ASƐMBISA YI HO HIA: Yɛtse wiadze bi a etsirmuɔdzen nye emumuyɛsɛm ahyɛ mu mã. Asɔrasɔr pii na wɔkyerɛkyerɛ dɛ amandzehu a ɔto nyimpa no yɛ Nyankopɔn ne pɛ a.
NKYERƐKYERƐMU A BIBLE NO DZE MA: Emumuyɛsɛm mmfir Nyankopɔn. Job 34:10 kã dɛ: ‘Ɔmpar Nyankopɔn dɛ ɔbɛyɛ ndzebɔnyɛ, na Otumfo dɛ ɔbɛyɛ emumuyɛ.’ Nyankopɔn wɔ botae a ɔdɔ wɔ mu ma adasamba. Ne dɛm ntsi na Jesus se yɛnsɔr dɛ: “Hɛn Egya a ewɔ sor, . . . w’ahendzi mbra, wɔnyɛ wo pɛ wɔ asaase do dɛ ɔsor.” (Matthew 6:9, 10) Nyankopɔn dwen hɛn ho papanara. Ne dɛm ntsi na ɔayɛ dza ohia biara na ama botae a ɔwɔ ma adasamba no eetsim.​—John 3:16.
Hwɛ Genesis 1:26-28; James 1:13; nye 1 Peter 5:6, 7.
SIANTSIR A ASƐMBISA YI HO HIA: Nyimpa pii na wɔahwer hɔn nkwa wɔ akodzi mu. Na hɛn mu biara so ehyia amandzehu wɔ n’asetsena mu pɛn.
NKYERƐKYERƐMU A BIBLE NO DZE MA: Nyankopɔn abɔ hɛn anohoba dɛ, ɔbɛma asomdwee ahyɛ asaase nyinara do mã. Wɔ Nyankopɔn Ahendzi mu no, nyimpa “runnsũa akodzi bio.” Mbom wɔdze “hɔn mfõwa abobɔ nsɔw.” (Isaiah 2:4) Nyankopɔn bɛma amandzehu nye emumuyɛsɛm nyinara abɔ adze. Bible no akã ato hɔ dɛ: “[Nyankopɔn] bɛpepa hɔn enyiwa mu nyinsuwa nyina; na owu nnyi hɔ bio; na awerɛhow, nye sũ, nye yaw bi nnyi hɔ bio: osiandɛ nkan no ndzɛmba [amandzehu nye emumuyɛsɛm a nyimpa hyia ndɛ kã ho] no etwa mu.”​—Nyikyerɛ 21:3, 4.
Hwɛ Ndwom 37:10, 11; 46:9; nye Micah 4:1-4.
SIANTSIR A ASƐMBISA YI HO HIA: Asɔrasɔr pii na wɔkyerɛkyerɛ dɛ ɔkra bi a onnwu da tse nyimpa mu. Nyimpa binom so gye dzi dɛ ewufo wɔ tum a wɔdze tseetsee atseasefo. Dɛmara so na binom kyerɛkyerɛ dɛ Nyankopɔn twe ndzebɔnyɛfo aso afebɔɔ wɔ abɔnsamgyamu.
NKYERƐKYERƐMU A BIBLE NO DZE MA: Sɛ nyimpa wu a, ɔnnkɔdo nntsena ase bio osiandɛ owu yɛ nkwa ebirabɔ. Ɔsɛnkafo 9:5 kyerɛ dɛ: “Ewufo dze, wonnyim biribiara.” Osiandɛ ewufo nnyim biribiara ntsi, wonnkotum atseetsee atseasefo, eso worunntum mmboa hɔn.​—Ndwom 146:3, 4.
Hwɛ Genesis 3:19 nye Ɔsɛnkafo 9:6, 10.
SIANTSIR A ASƐMBISA YI HO HIA: Yɛpɛ dɛ yɛnye hɛn adɔfo bɔ mu tsena afebɔɔ wɔ enyigye mu. Ntsi ɔnnyɛ nwanwa dɛ hɛn nyina rohwɛ kwan dɛ yebehyia hɛn adɔfo a woewuwu no bio.
NKYERƐKYERƐMU A BIBLE NO DZE MA: Wobenyan nyimpa pii efi ewufo mu. Jesus abɔ hɛn anohoba dɛ ‘hɔn a wɔwɔ nda mu nyina . . . befir edzi.’ (John 5:28, 29) Dɛ mbrɛ ahyɛse no Nyankopɔn ne botae ma adasamba tse no, ewufo a wobenyan hɔn no bɛtsena paradise wɔ asaase do. (Isaiah 65:21-23) Nyimpa asoɔmbrɛwfo a wɔbɛtsena paradise no benya apɔwmudzen nye onnyiewiei nkwa. Bible no kyerɛ dɛ: “Atseneneefo benya asaase no edzi, na wɔaatsena mu daa.”​—Ndwom 37:29.
Hwɛ Job 14:14, 15; Luke 7:11-17; nye Ndwuma 24:15.
SIANTSIR A ASƐMBISA YI HO HIA: Ɔtse dɛ mbrɛ nsɔr ahorow mu nyimpa pii bɔ mpaa. Naaso, hɔn mu pii susu dɛ Nyankopɔn nntsie hɔn mpaabɔ.
NKYERƐKYERƐMU A BIBLE NO DZE MA: Jesus kyerɛkyerɛɛ dɛ sɛ yɛrobɔ mpaa a, mma yenntsĩ nsɛm kor noara mu. Jesus kyerɛɛ dɛ: “Na hom rosɔr a, mma hom nnyɛ kasansanmu gyan.” (Matthew 6:7) Sɛ yɛpɛ dɛ Nyankopɔn tsie hɛn mpaabɔ a, ɔsɛ dɛ yedua ɔkwan a ɔsɔ n’enyi do bɔ mpaa. Na sɛ yebotum ayɛ dɛm a, ohia dɛ yesũa n’apɛdzeyɛ na yɛbɔ mpaa ma ɔnye no hyia. John Nwoma a Odzi Kan 5:14 kyerɛ mu dɛ: “Sɛ yɛserɛ biribiara dɛ mbrɛ [Nyankopɔn] ɔpɛ a, otsie hɛn.”
Hwɛ Ndwom 65:2; John 14:6, 14; nye 1 John 3:22.
SIANTSIR A ASƐMBISA YI HO HIA: Nyimpa pii susu dɛ enyigye a wobenya wɔ hɔn asetsena mu no gyina sika, dzin a wɔbɛgye anaa ahoɔfɛw do. Naaso mbɔdzen biara a wɔbɔ dze hwehwɛ enyigye no nnkesi hwee.
NKYERƐKYERƐMU A BIBLE NO DZE MA: Jesus ma yehu dza ɔdze enyigye ba. Ɔkyerɛɛ dɛ: “Nhyira akã hɔn a wotsie Nyankopɔn asɛm na wodzi do.” (Luke 11:28) Sɛ yebenya nokwar enyigye a, ɔsɛ dɛ yɛgye ber dze sũa Nyankopɔn ho nokwasɛm nye ne botae ma adasamba. Yebohu Nyankopɔn ho nokwasɛm yi wɔ Bible no mu. Nokwasɛm yi a yebosũa no bɔboa hɛn ma yeehu dza ohia ankasa nye dza onnhia wɔ hɛn asetsena mu. Sɛ yɛdze hɛn gyinaesi nye hɛn ndzeyɛɛ gyina nokwasɛm a ɔwɔ Bible no mu a, yebenya akomatɔyamu wɔ hɛn asetsena mu.
Hwɛ Mbɛbusɛm 3:5, 6, 13-18 nye 1 Timothy 6:9, 10.
Iyi nye nkyerɛkyerɛmu kakra a Bible no dze ma wɔ nsɛmbisa ahorow esia yi ho. Aso epɛ dɛ ihu pii kã ho? Sɛ epɛ dɛ enye Nyankopɔn nya ebusuabɔ pa a, ebɔhwehwɛ kyerɛwsɛm mu nokwasɛm yi pii akã ho. Ibia esusu dɛm nsɛmbisa afofor yi so ho pɛn: ‘Sɛ Nyankopɔn dwen hɛn ho a, ebɛn ntsi na ɔama ndzebɔnyɛ na amandzehu kwan ma akɔ do ber tsentseen yi? Mebɛyɛ dɛn ama m’ebusua asetsena aayɛ enyigye?’ Bible no dze nsɛmbisa yi nye afofor a ɔkã ho no ho mbuae a ɔtɔ aso mu ma.
Naaso, ndaansa yi nyimpa pii twentweɔn hɔn ananadze dɛ wɔbɔhwehwɛ Bible no mu. Wobu Bible no dɛ ɔyɛ buukuu a n’asetse yɛ dzen. Aso w’enyi bɛgye ho dɛ wɔbɔboa wo ma enya mbuae no wɔ Bible no mu? Jehovah Adasefo botum aboa wo wɔ kwan ahorow ebien do.
Dza odzi kan no, wɔayɛ buukuu a ɔato dzin Ebɛnadze na Bible no Kyerɛkyerɛ Hɛn? Iyi bɔboa wo ma aahwehwɛ nkyerɛkyerɛmu a Bible no dze ma wɔ nsɛmbisa a ohia wɔ asetsena mu no ho, naaso ɔrenngye wo ber pii. Dza otsĩa ebien nye ofie Bible adzesũa a wɔnye afofor yɛ a wɔnngye sika biara. Jehovah Adasefo no mu kor a ɔwɔ w’apaamu hɔ a onyim Bible nkyerɛkyerɛ bɛba abɔboa wo. Dapɛn biara ɔdze mber kakra nye wo bosũa Bible no wɔ wo fie anaa bea a oye ma wo a irunntua sika biara. Nyimpa ɔpepem pii a wɔwɔ wiadze mfɛndzanan nyina enya dɛm nhyehyɛɛ yi do mfaso. Hɔn mu pii dze enyigye agye ato mu dɛ: “Iyi nye nokwar no ampa!”
Yerunntum mmfa akoradze biara ntoto Bible mu nokwasɛm yi ho. Bible mu nokwasɛm ma hɛn adwen si hɛn pi, na yɛgye hɛn ho fi gyedzihun nye suro a ntseasee biara nnyi mu ho. Ɔma hɛn enyidado nye akoma mu enyigye. Jesus see dɛ: “Hom bohu nokwar no, na nokwar no bɛyɛ hom adehye.”​—John 8:32.
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan Ana Epɛ dɛ Ihu Nokwar No?